Black Magic: အောင်ရင်ငြိမ်းအတွက် ဝေဖန်သံများ စုစည်းမှု
အောင်ရင်ငြိမ်းအတွက် ဝေဖန်သံများ စုစည်းမှု
Posted by Black Magic | Posted in Others | Posted on 12:53 PM
Romanbots World ကိုမဖတ်ရသေးရင် အောက်က Link မှာ အရင် ဒေါင်းလိုက်ဗျာ...၊
အခုမှ ဖတ်ရလို့ အခုမှ မှတ်ချက်ပေးလိုက်ပါတယ် အောင်ရင်ငြိမ်းရေ။
အောင်ရင်ငြိမ်းနဲ့ သိကျွမ်းပါတယ်။ သူ့အပေါ် ကာကွယ်စရာရော တိုက်ခိုက်စရာပါ မရှိပါ။ အားထုတ်မှုနဲ့ သတ္တိကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ထိရောက်သော အားထုတ်မှုဖြစ်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
၁။ ဒီလိုအချိန်အခါ ဒီလိုအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် ဒီလိုလှုမှုဝန်းကျင်အခြေအနေမှာ ဒီလိုစာအုပ်မျိုး ရေးသားထုတ်ဝေရင် ဒီလိုအကျိုးဆက်မျိုး ခံရမယ်ဆိုတာ ကြိုတင်စဉ်းစားပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒါကြောင့် ဆူညံသံတွေ၊ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ၊ အရေးယူမှုတွေ(ရှိလာရင်) မှန်သည်ဖြစ်စေ မှားသည်ဖြစ်စေ စာရေးသူဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ရန်လိုခြင်း အပြစ်တင်ခြင်း မပြုပဲ ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံ ရင်ဆိုင်ဖို့ပဲရှိပါတယ်။ အုတ်အော်သောင်းတင်း ဖြစ်သွားစေတာ စာရေးသူရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တစ်ခု ဆိုရင်လည်း အောင်မြင်တယ်လို့ ယူဆနိုင်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ လူဖတ်များတယ်ဆိုတာ ဒီအထဲမှာပါတဲ့ erotic ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို ဒါမျိုးမဖတ်ဖူးသူတွေက ရှာဖွေဖတ်ကြတာလား၊ လူပြောသူပြောများလို့ ဘာမှန်းသိအောင် ဖတ်ကြည့်ကြတာလား၊ စာရေးသူတင်သွင်းချင်တဲ့ အယူအဆတွေကို တွေးတောချင်သူတွေ များလာတာလား၊ စာရေးသူနဲ့ စာအုပ်ထွက်ရှိခြင်း အပေါ်မှာသာ အထူးအဆန်းအဖြစ် စိတ်ဝင်စားသူတွေလား အကြောင်းအမျိုးမျိုး ရှိကြမယ်။ ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက် ပေါက်မြောက်ခဲ့သလားဆိုတာ စာရေးသူက အသိဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
၂။ တစ်အုပ်လုံးအပြာစာအုပ်လို့ ပြောနိုင်မယ်မထင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီစာအုပ်မှာ erotic ဖြစ်တဲ့ ဇာတ်ကွက်အချို့ရော၊ ထုတ်နုတ်ထားတဲ့ အယူအဆအတွေးအခေါ်တွေပါ လက်ရှိ လူမှုဝန်းကျင်အနေအထားမှာ အလွန်တရာ အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကတော့ ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ အမှန်တရားပါ။ ဒီလိုအငြင်းပွားဖွယ်တွေကို ဘက်ပေါင်းစုံက တွေးတောဆင်ခြင်စရာဖြစ်အောင် ဇာတ်လမ်းကိုလည်း ဆင်မထား၊ တင်ပြပုံကိုလည်း ခပ်ပါးပါး ဘက်လိုက်မှုကင်းကင်း မထားပဲ စာရေးသူရဲ့ ရည်တည်ချက်ပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး အယူအဆမတူသူတွေကို စိန်ခေါ်ပြီး ပညာပေးသလိုလို သင်ကြားပေးသလိုလို ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ အကိုးအကားအစိတ်အပိုင်းတွေကို တိုက်ရိုက် အတုံးလိုက်အတစ်လိုက် တင်သွင်းလာတဲ့အခါ ပိုလို့ အငြင်းပွားဖွယ် ဖြစ်လာပါတယ်။ စာအုပ်မဖတ်ဖူးဘူးပဲနဲ့တောင် လက်ခံတာ ငြင်းပယ်တာတွေ တွေ့လာရပါတယ်။
၃။ စာရေးသူရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကိုလည်း ဒီထက်ပိုပြီး အစာကြေစေချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်လေ့လာမှု homework ကိုယ် ကျေအောင် အရင်လုပ်စေချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စာရေးသူကိုယ်တိုင် အစာကြေမှ သူကနေ တင်သွင်းဆင့်ပွားလိုက်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို ဖတ်သူတွေကလည်း လုံးစေ့ပတ်စေ့ ဆင်ခြင်တွေးတောနိုင်မှာမို့လို့ပါ။ ဥပမာ- တစ်ဖက်ကတော့ မိန်းမတွေကို အထင်သေးလိုက်၊ မိန်းမဆန်တယ်တို့ မိန်းမလိုမိန်းမရဖြစ်တယ်တို့ စကားတွေသုံးနှုန်းပြီး ရှေးရိုးစွဲ သဘောထားတွေကို ဖော်ပြလိုက်၊ လိင်ဆက်ဆံမှုလွတ်လပ်ခွင့်ကျတော့ မိန်းမတွေလည်း တန်းတူသဘော ရှိသင့်ကြောင်း အယူအဆတွေကို ကိုးကားပြောဆိုလိုက်နဲ့ တွေးခေါ်မှုဟာ တသမတ်တည်း ပွင့်လင်းသစ်လွင်မှု မရှိပါဘူး။ erotic အခန်းတွေမှာလည်း မိန်းမအထာကို ကျွမ်းကျင်တယ်ဆိုတာကို ပြချင်စိတ်အားကြီးနေတာ၊ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ဒါကို သိပ်လိုအပ်နေရှာမှာပဲ လို့ ထင်စေတဲ့ အရေးအသားတွေဟာလည်း မိန်းမတွေအပေါ် လေးစားမှုနည်းတဲ့ ယောက်ျားမျိုးတွေရဲ့ သာမန် ရှေးရိုးစွဲ စရိုက်တွေပဲ မဟုတ်ပါလား။
၄။ ကိုယ့်အယူအဆနဲ့ ဆန့်ကျင်သူတွေ သဘောမတူသူတွေအပေါ် တိုက်ခိုက်လိုခြင်း၊ အထင်သေးခြင်းမျိုး ပြတာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ သဘောတရားမဟုတ်ပါ။ တကယ့်ဘဝမှာ ကွန်ဆာ့ဗတစ် မဟုတ်ရင် လစ်ဘရယ်၊ လစ်ဘရယ် မဟုတ်ရင် ကွန်ဆာ့ဗတစ် လို့ အဖြူနဲ့အမည်း နှစ်မျိုးသာ ရှိတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီစာအုပ် တစ်အုပ်လုံးကိုလည်း လုံးလုံး သဘောမတူသူရှိမယ်။ တစ်အုပ်လုံးကို အပြည့်အဝ လက်ခံသူရှိမယ်။ တချို့အပိုင်းသဘောတူ တချို့အပိုင်း သဘောမတူသူရှိမယ်။ ဒါကြောင့် အဆောတလျင် တံဆ်ိပ်ကပ်ခြင်းဟာ မလျော်ကန်ပါဘူး။
၅။ အသစ်ဆိုပြီး ဖြစ်စေချင်တာကို ကာလံဒေသံ မစဉ်းစားဘဲ အတင်းကာရော ချပြခြင်းဟာ လူအများ နားမလည်နိုင်တဲ့အခါ မူလတွေးခေါ်ရှင်တွေကိုတောင် နှိမ့်ချသလိုဖြစ်တတ်တယ်။ မိမိရည်ရွယ်ချက်ကို မိမိကိုယ်တိုင် ဖျက်ဆီးမိတတ်ပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ ကိုယ်ယုံကြည်ရာကို အမှန်လို့ ထင်ကြတာချည်းပဲ။ လူတိုင်းဟာလွတ်လပ်စွာကွဲပြားခွင့်ရှိပေမယ့် သူတပါးရဲ့ကွဲပြားတဲ့ ယုံကြည်မှုတွေ ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေကို မထီမဲ့မြင်ပြုဖို့တော့မသင့်ဘူး။ ဥပမာ ဝေးခေါင်သီလံတဲ့ တောရွာကလေးတစ်ရွာမှာ သစ်ငုတ်တိုတစ်ခုကိုပဲ ကိုးကွယ်နေကြတယ်ဆိုဦးတော့။ အဲဒါဟာ အယူမှားဆိုပြီး ဝုန်းဒိုင်းနဲ့ သစ်ငုတ်တိုကို ချက်ချင်းဆွဲနုတ်ပြီး မီးရှို့ပစ်ရင် ဒေါသထွက်ကြ၊ ဝမ်းနည်းကြ၊ ကြောက်လန့်ကြမယ်။ မတူကွဲပြားတဲ့ အယူအဆတွေ တန်ဖိုးတွေကို ကိုင်တွယ်ရတာ အင်မတန်သိမ်မွေ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဘာသာရေးတို့ ကျင့်ဝတ်တို့နဲ့ ပတ်သက်လာရင် ပိုလို့ ထိလွယ်ရှလွယ်ပါတယ်။
၆။ တကယ်သစ်သလား မသစ်ဘူးလားဆိုတာကတော့ စာအုပ်အငှားဆိုင်မှာ ပြောနေကြသလိုပါပဲ။ မဖတ်ရသေးရင် အသစ်ပေါ့ တဲ့။ တချို့တွေအတွက် သစ်ပြီး တချို့အတွက်ကတော့ သိဖူးမြင်ဖူးပြီးသား ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စာရေးသူရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်တွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကလည်း what is original? လို့ မေးခွန်းထုတ်နေတဲ့ခေတ်မှာ သိပ်ပြီး ပြဿနာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံကို ကိုယ်ပြောပြီး ကိုယ်ကြိုက်ရာကို ထုတ်နုတ်မှီငြမ်းတာ စာရေးသူ့အခွင့်အရေးပါပဲ။ ကိုယ့်စကားလိုလို ပြောတာနဲ့စာရင် ဘယ်သူက ဘယ်လိုပြောသွားတာပါလို့ အတိအလင်း ဝန်ခံကိုးကားတာက ပိုကောင်းပါသေးတယ်။ (အတုံးလိုက်အတစ်လိုက် ဖြစ်တာက လွဲလို့ပေါ့။) မြန်မာစာပေလောကအတွက်တော့ ဒီလိုအကြောင်းအရာနဲ့ ဒီလိုပြဿနာတွေကို တရားဝင်ထုတ်ဝေ တင်ပြလာတာက အသစ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၇။ ဒီစာအုပ်ကို နမူနာပြပြီး အရင်လို အစိုးရက စိစစ်ရေး ပြန်တင်းကျပ်လာမလား လို့ စိုးရိမ်လာကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အများရဲ့ လွတ်လပ်စွာဖော်ပြခွင့်ကို ထိခိုက်လာရင် ဘယ်သူမှ ကျေနပ်မယ်မထင်ပါဘူး။ တစ်ဦးချင်းတစ်ယောက်ချင်း ကိုယ်ထင်တဲ့ အမှန်တရားကို လွတ်လပ်စွာ ကွဲပြားခွင့် တင်ပြခွင့်ရှိပေမယ့် လူအများကို ထိခိုက်တယ်လို့ ယူဆစရာဖြစ်နေကြတယ် ဆိုရင်လည်း ပြဿနာပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ဒီစာရေးသူကို ဝိုင်းအကာအကွယ်ပေးရမှာလား ဒါမှမဟုတ် ဝိုင်းကန့်ကွက်ရမလားဆိုတာလည်း စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ မူဝါဒရှုထောင့်က ကြည့်ရင် တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ခုခုနဲ့ ငြိစွန်းနေရင်တော့ အဲဒီဥပဒေ တည်နေသရွေ့ အရေးယူပိုင်ခွင့်ကတော့ ရှိနေပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် case by case စီမံသင့်ပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး တရားရုံးကို မရောက်ဘဲ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမှာ အရင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းကြတဲ့ self-regulation ကိုလည်း အားပေးသင့်ပါတယ်။
၈။ စာရေးသူရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို လေးစားပါတယ်။ ခေတ်စနစ်ပွင့်လင်းလာတာနဲ့အမျှ ဒီလိုအကြောင်းအရာ အတွေးအခေါ်တွေဟာ အနှေးနဲ့အမြန်ဆိုသလို ထွက်ပေါ်လာစရာရှိပါတယ်။ အခြားကဏ္ဍတွေမှာ အခြေခံအဆင့်သာ ရှိသေးတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် စောနေလွန်းသလားဆိုတာက ဝေဖန်စရာဖြစ်ပါတယ်။ တင်ပြပုံဟာ ချပြတာမျိုးထက် စည်းရုံးခြင်း မြှင့်တင်ခြင်း ခုခံခြင်း ဆန်နေတဲ့အတွက် ဘယ်လို ဘာကြောင့် ဆိုတဲ့ ဆွေးနွေးစရာ မေးခွန်းမျိုးထက် ဒါကိုလက်ခံလား လက်မခံဘူးလားဆိုတဲ့ yes or no မေးခွန်းတွေ ထွက်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက် မလွယ်ကူပါဘူး။ ကိုးကားထားတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေထဲမှာ အခြားရှုထောင့်များက ထပ်မံလေ့လာစရာတွေ ရှိပါတယ်။ issue တွေကလည်း တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အပျိုစင်အယူအဆ၊ ဥပဒေဆိုင်ရာ၊ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ၊ အိမ်ထောင်ရေးဆိုင်ရာ၊ လက်ထပ်ထိမ်းမြားရေးဆိုင်ရာ၊ ဂေးအခွင့်အရေး စသည်ဖြင့် ပါဝင်ပါတယ်။ လောလောဆယ် လူတွေရဲ့ အာရုံ ကတော့ စာရေးသူနဲ့ ထုတ်ဝေမှု အပေါ်မှာပဲ ပိုနေပါတယ်။ (ဒီမှတ်ချက်ကလည်း အဲဒီလိုပါပဲ။) တချို့ကတော့ ဒီစာအုပ်အကြောင်း ပြောပြောနေတာ ဒီစာအုပ်ကို လူများများ ပိုဖတ်ဖြစ်အောင် မြှင့်တင်နေသလိုပဲလို့ ဆိုကြပါတယ်။ လူများများပိုဖတ်ဖြစ်ပြီး တွေးတောဆင်ခြင် ကြည့်လာကြတာမျိုးဆိုရင်တော့ ကောင်းပါတယ်။
၉။ အခုအထိတော့ ခြုံငုံကြည့်သူတွေအတွက် တစ်ခါလာလည်း ဒီဖိုမကိစ္စနဲ့ ဒီအတွေးအခေါ် အသားပေး လို့ ထင်စေပါတယ်။ ခေတ်သစ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွက် အခြားသောကဏ္ဍတွေမှာလည်း ဖောက်ထွက်ပြီး စဉ်းစားစရာဖြစ်တဲ့ အကျိုးရှိတဲ့ အယူအဆတွေကို ဆက်ပြီး ချပြစေချင်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာလည်း နိုင်ငံရေး ဘာသာရေး နောက်ခံတွေ နည်းနည်းပါးပါး ထည့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ စာရေးသူကြိုက်ရာဘက်ကနေ အတင်းရပ်ပြတဲ့ တင်ပြပုံမျိုးထက် စာကိုဖတ်ပြီး လူတိုင်း နက်နက်နဲနဲတွေးတောပြီး ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ဖြစ်စေတာမျိုးကို ပိုဖတ်ချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တစ်ခါလာလည်း ဒီအကြောင်းတွေပဲဆိုရင်တော့ စာရေးသူဟာ ဒီအကြောင်းတွေပဲ ခေါင်းထဲမှာ ကြီးစိုးနေတယ်လို့ ထင်စရာဖြစ်လာပါမယ်။
၁၀။ စာရေးသူက“လူ့အဖွဲ့အစည်းအဟောင်းကြီးကို လူသားသစ် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်အောင်လုပ်ကြဖို့ အသိအမြင်နဲ့ အနုပညာ အသေခံဗုံးခွဲခြင်း” လို့ဆိုပါတယ်။ အသေခံဗုံးခွဲသူတိုင်းဟာ ပြင်းပြတဲ့ ယုံကြည်ချက်တစ်ခုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့အနေအထားတွေမှာ မျက်ကန်းယုံကြည်မှု (blind faith) လို့တောင် ပြောကြတာရှိပါတယ်။ ဒီဝေါဟာရ အရ စာရေးသူဟာ လူသားသစ်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ထွန်းစေချင်လွန်းလို့ သူ့ရဲ့ အသိအမြင်တွေနဲ့ အနုပညာကို အသေခံပြီး ဖောက်ခွဲလိုက်တယ်လို့ နားလည်ရမှာလား။ ရှိပြီးသား အသိအမြင်ဆိုတာလည်း သတ်လို့မရပါဘူး။ အနုပညာစစ်မှန်ရင် အနုပညာဆိုတာလည်း တမင်သတ်လို့တော့ မသေနိုင်ပါဘူး။ သေနိုင်တာတွေက လူတို့၊ နာမည်တို့ပါ။ ဘယ်အရာပဲ သေသွားသွား သေတဲ့အခါ ကိုယ်ကောင်းတယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့ ဂတိကို တကယ်လားပါစေလို့ အောင်ရင်ငြိမ်းကို ဆုတောင်းပါတယ်။
၁၁။ အခြားသော အသေးစိတ် သုံးသပ်မှုတွေအတွက်တော့ ကောင်းကင်ကို၊ အောင်ကောင်းမြတ်၊ အေးလဲ့ တို့ ရေးထားတာကို ရည်ညွှန်းလိုပါတယ်။
တစ်ကယ်တမ်းက ရိုမန်းဘော့ထ်ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို ကျနော် အများကြီးမျှော်လင့်ထားတာပါ။ စာအုပ်ကို ဖတ်ပြီးတော့ စာရေးတဲ့သူအတွက်ရော၊ အမှာစာရေးတဲ့သူတွေအတွက်ရော တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ စာအုပ်တစ်ခုလုံးမှာ အဓိကပါတာဆိုလို့ ရိုမန်ဘော့ (စက်တစ်ပိုင်း လူတစ်ပိုင်း) ဖြစ်နေတဲ့သူနဲ့ တွဲတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအကြောင်း၊ ၄င်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံမှု၊ အိုရှိုး၊ နစ်ရှေး၊ ဖူးကိုး၊ ဆိုင်မွန် ဒီဗူးဗွား စသူတို့ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေသာပါပါတယ်။
စာအုပ်ဇာတ်ကြောင်းကို မပြောခင် ကျနော့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Raphael Ram ပြောခဲ့တဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းကို ပြန်ပြောချင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မှိုလိုပေါက်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးကဗျာတွေကို သဘောမကျကြောင်း ပြောတဲ့အခါ သူပြန်ပြောတာက "နိုင်ငံရေးက အရှေ့ရောက်ပြီး အနုပညာက အနောက်ရောက်နေရင် ကဗျာမဟုတ်တော့ဘူး။ အလကားပဲ"။
အနုပညာဖန်တီးတာဟာ အနုပညာအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးဘာသာအတွက်ဆိုရင် ဒါဟာ အနုပညာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ထို့အတူ စာရေးဆရာသိထားတဲ့ သို့မဟုတ် ယုံကြည်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို ဝါဒဖြန့်ဖို့ စာရေးတယ်ဆိုရင် ဒါဟာ အနုပညာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ အနုပညာဟာ အနောက်ရောက်သွားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ (အားနာနာနဲ့ ပြောရရင်) ရိုမန်ဘော့ဟာ ဒီလိုအမျိုးအစားထဲက တစ်ခုပါ။
စာအုပ်မျက်နှာဖုံးမှာ Not for Conservatives လို့ရေးထားပြီး စာအုပ်ထဲမှာလည်း ကွန်ဆာဗေးတစ် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဒေါသထွက်နေတဲ့ စာရေးဆရာရဲ့လေသံကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကွန်ဆာဗေးတစ်၊ လစ်ဘရယ် အယူဝါဒနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း စာရေးဆရာ (ဒီကလူတချို့လည်း ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်) ဝိုးတဝါးဖြစ်နေတာတစ်ခုလည်း ရှိပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ကွန်ဆာဗေးတစ်အယူဝါဒနဲ့ လစ်ဘရယ်အယူဝါဒနှစ်ခုမှာ ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းတယ်၊ ဘယ်ဟာက ပိုဆိုးတယ် မရှိပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံက ခေတ်ပညာတတ်တွေထဲမှာ ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို လစ်ဘရယ်ဖြစ်မှ လူရာဝင်တယ်ထင်ကြတယ် ထင်ကြသလားမသိ အကုန်လုံးက လစ်ဘရယ်လို့ ကြွေးကြော်ကြတာ တွေ့နေရတယ်။ ကွန်ဆာဗေးတစ် အယူဝါဒကြောင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အသေးဆုံးယူနစ်တွေဖြစ်တဲ့ မိသားစုတွေရှိလာတယ်။ ဒီမိသားစုတွေကို အခြေခံပြီး မြို့ရွာတွေနဲ့ လူမှု ပိရမစ်တစ်ခုကို တည်ထောင်နိုင်လာတာပါ။ ထိုနည်းတူပဲ လစ်ဘရယ်ဝါဒကြောင့် လူ့တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ တစ်သီးပုဂ္ဂလဆန်မှုတွေ တိုးတက်လာတာပါ။
ဗြိတိသျှလူမျိုး ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာမတစ်ယောက်ရဲ့ အကြံပေးစကားတစ်ခုကိုလည်း ပြန်လည် ဝေမျှချင်ပါသေးတယ်။ "စာရေးဆရာဆိုတာ မေးခွန်းမေးဖို့သာဖြစ်ပြီး အဖြေတွေ ပေးနေဖို့မဟုတ်ပါဘူး"။ အောင်ရင်ငြိမ်းဟာ ဒီစည်းမျဉ်းကို ကောင်းကောင်းကြီး ချိုးဖောက်ထားပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝန်ခံရရင် အောင်ရင်ငြိမ်းရဲ့ စာအုပ်မှာ reference ပေးထားတဲ့ တွေးခေါ်ပညာရှင်တွေ စိတ်ပညာရှင်တွေထဲမှာ အိုးရှိုးတစ်ယောက်ကလွဲလို့ ကျန်သူတွေကို ကျနော်လေးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အောင်ရင်ငြိမ်းရဲ့ သူလက်ခံတဲ့ တွေးခေါ်မှု စနစ်ကို စာဖတ်သူတွေကို လက်ခံခိုင်းနေတာကို ကျနော် လုံးလုံး မနှစ်မြို့ပါဘူး။ ဒီ့အပြင် တချို့သော အသုံးအနှုန်းတွေ ဥပမာ "ခင်ဗျားတို့ ကွန်ဆာဗေးတစ်လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ခင်ဗျားလိုကွန်ဆာဗေးတစ် တစ်ယောက်ကတော့ လက်ခံနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး" စတာတွေဟာ စာဖတ်သူကို စော်ကားတဲ့ပုံသာပေါ်နေပါတယ်။
နောက်ထပ်စိတ်ပျက်မိတာကတော့ စာဖတ်သူကို သူပြောချင်နေတာတွေ အတင်းပြောပြနေတဲ့အချက်ပါ။ အောင်ရင်ငြိမ်းဟာ ဝတ္ထုရေးနေတာလို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ အတန်းတစ်တန်းမှာ လက်ချာပို့ချနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ စကားပြောခန်းတွေဟာ သဘာဝကျမှု ပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ ကျနော် မနှစ်မြို့ဆုံးအချက်ကတော့ စာဖတ်သူကို အိုးရှိုးပြောတဲ့စကားတွေ နစ်ရှေးပြောတဲ့စကားတွေထိုင်ပြောနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝတ္ထုရေးသူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့အတွေးတွေကို စာဖတ်သူကို ပေးချင်တာ သဘာဝပါပဲ။ ဒါပေမယ့် George Orwell ဟာ Animal Farm မှာ အာဏာရှင်ဗဟိုပြုစနစ် (ဝါ) ကွန်မြူနစ်စနစ်အကြောင်း တိုက်ရိုက်ဝေဖန်ထားတဲ့ တစ်ကြောင်းတစ်လေများပါပါသလား။ ဒါမှမဟုတ် Kobo Abe ရဲ့ The Woman in the Dunes မှာ ဖြစ်တည်မှုပဓါနဝါဒအကြောင်း ဘယ်တွေးခေါ်ပညာရှင်က ဘယ်လိုပြောခဲ့တာဆိုပြီး စာဖတ်သူကို တိုက်ရိုက်လက်ချာပေးနေတာများရှိပါသလား။ ဝတ္ထုအရေးအသားဟာ သာမန် စကားပြေအရေးအသားနဲ့ မတူတဲ့အချက်ဟာ ဇာတ်ကြောင်းကနေ စာဖတ်သူကို မိမိဘာသာ မေးခွန်းမေးစေပါတယ်။ ရိုမန်ဘော့မှာ ဒါဟာ သိသိသာသာပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။
ရိုမန်ဘော့ရဲ့ စကားပြေရေးသားပုံဟာလည်း ပျော့ပျောင်းမှုမရှိဘဲ စကားပြေကောင်းတစ်ပုဒ်မှာ ပါဝင်သင့်တဲ့ ဥပမာအလင်္ကာနဲ့ ရူကပအလင်္ကာတို့ အတော်လေးနည်းပါတယ်။ စာဟန်ကလည်း သွက်ခြင်းမရှိဘဲ မိမိရေးလိုတဲ့ လိင်ကိစ္စ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ အတွေးအခေါ်တွေကိုပဲစုပြုံထည့်ထားတာ အရုပ်ဆိုးလွန်းပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ကို ဝေဖန်တာ စာပေရှုထောင့်ကဝေဖန်တာသာ ဖြစ်ပြီး ယဉ်ကျေးမှုဘက်က လုံးဝမပါပါဘူး။ freethinker တစ်ယောက်မှာ အဓိကထားရှိရမယ့်အချက်က လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်လို့ရှိရင် အခြားသူတွေကိုလည်း လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်စေရပါမယ်။ အောင်ရင်ငြိမ်းမှာတော့ ဒီအချက်ပျောက်ဆုံးနေပြီး သူသဘောကျတဲ့ လူနေမှုစနစ်သစ်ကိုပဲ စာဖတ်သူကို ယုံခိုင်းနေတာဟာ ဝိရောဓိဖြစ်ပါတယ်။
ရိုမန်ဘော့စာအုပ်ကို ဝေဖန်ပြစ်တင်သံတွေ၊ တားမြစ်ပိတ်ပင်ဖို့လုပ်မယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပထမဦးဆုံး အဝေဖန်ခံရတဲ့ စာအုပ်မဟုတ်လို့ သိပ်တော့မအံဩပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ များမကြာသေးခင်က Murakami ရဲ့ Norwegian Wood ထွက်တုန်းကလည်း ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ မအပ်စပ်ဘူးလို့ဝေဖန်ခံရပါတယ်။ Toni Morrison ရဲ့ The Bluest Eye ထွက်တုန်းကလည်း အမေရိကန်ကျောင်းတွေမှာ မပြဌာန်းဖို့ ကန့်ကွက်မှုတွေ လုပ်ကြပါတယ်။ ဒီစာအုပ်နှစ်အုပ်လုံးမှာ သာမန်စာအုပ်ထက်လွန်ကဲတဲ့ လိင်မှုရေးရာတွေပါကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်အရာကများ ဒီဝတ္ထုနှစ်အုပ်ကို ဝေဖန်မှုတွေကို ကျော်လွှားပြီး အောင်မြင်စေပါသလဲ။ သေချာတာကတော့ လိင်မှုရေးရာတွေပါလို့ ဒီစာအုပ်တွေနာမည်ကြီးတာမဟုတ်ပါဘူး။ Norwegian Wood မှာ တိုတောင်းပြတ်သားပြီး ကြိယာတွေပေါပေါများများသုံးနိုင်တဲ့ ရေးဟန်၊ လူ့တွေရဲ့ အထီးကျန်ဆန်မှု ဝေဒနာ၊ လူ့ဘဝရဲ့ စိမ်းကားလွန်မှု၊ သေခြင်းတရား၊ ခွဲခွာရခြင်း စတာတွေကို ကောင်းကောင်းထင်ဟပ်နိုင်ပါတယ်။ The Bluest Eye မှာတော့ ဇာတ်ကြောင်းပြောခြင်းကို ပထမနာမ်စားတစ်လှည့် တတိယနာမ်စားတစ်လှည့်သုံးနိုင်တဲ့ အတတ်ပညာ၊ လူဖြူတွေအတိုင်း မျက်လုံးအပြာဖြစ်ချင်တဲ့ အာဖရိကန် လူမည်းမလေးတစ်ဦးရဲ့ ဆန္ဒကို အလှပဆုံး ဖော်ကျူးမှုဟာ စာအုပ်ကို ကယ်တင်လိုက်ပါတယ်။
စာပေအသေခံဗုံးခွဲဖို့လေ့ကျင့်နေမယ့်အစား မြန်မာစကားပြေကို လျော်ညီမယ့် အင်္လကာ၊ ကောင်းမွန်တဲ့ စကားပြောတည်ဆောက်မှု၊ ခိုင်မာတဲ့ဇာတ်လမ်းကျောရိုးနဲ့ပဲ ရေးတတ်အောင်ကြိုးစားရဦးမှာပါ။
"ဒီစာအုပ် ဖတ်သွားပြီးတော့ erotica လို့တော့ မထင်တော့ဘူး။ ကာမရာဂ စိတ် ဆွမှ ဆွမပေးနိုင်ပဲကိုး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ဖတ်နေတာ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်လား၊ ဒါမှမဟုတ် အဆိုအမိန့်တွေ၊အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် စုထည့်ထားတဲ့ အဆိုအမိန့်ပေါင်းချုပ်လားလို့ သံသယ ဖြစ်သွားတယ်။ အဆိုအမိန့်တွေတင် မကဘူး၊ နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေလည်း အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် ထည့်ထားတယ်။ အဆိုအမိန့်တွေနဲ့ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ် တည်ဆောက်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ပေမဲ့ ဝတ္ထုထဲမှာ စာရေးဆရာ အဆိုအမိန့်တွေကို ထည့်သုံးထားပုံက ချောချောမွေ့မွေ့ ပြေပြေပြစ်ပြစ် မရှိလှဘူး။
ဒီစာအုပ်ထုတ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက လိုက်ဖမ်းတယ် ဆိုတာတော့ လွန်လွန်းပါတယ်ဗျာ။ အောင်ရင်ငြိမ်းရဲ့ ဝတ္ထုကောင်းခြင်း မကောင်းခြင်း၊ တော်လှန်ရာ ရောက်ခြင်း မရောက်ခြင်းက တစ်ပိုင်း။ ညစ်ညမ်းတာ အကြောင်းပြ၊ ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြပြီး ဖမ်းတာတွေ အကျင့်ပါမှာ ကြောက်ရတယ်။ ပြီးတော့ ဒါရေးလို့ သူ့ကို ဖမ်းမယ်ဆိုတာ မျှတမှုလည်း မရှိဘူး။ အဲဒါမျိုးကိုတော့ ဝိုင်းပြီး ကာကွယ်ပေးကြဖို့ လိုမယ်ထင်တယ်။
လွတ်လပ်ခွင့် နဲ့ ပိတ်ပင်မှု
ဒါကတော့ ရိုမန်းဘော့ထ် မဖတ်ခင် ဟိုအရင်ကတည်းက တွေးခဲ့တဲ့ အတွေးမျိုးပါ။ သက်ဆိုင်နေလို့ ထည့်ရေးလိုက်ပါမယ်။
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တစ်ကားမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်း ပါတယ် ဆိုပါစို့။ လူငယ်တစ်ယောက်ဟာ အဲဒီ ဇာတ်ကားကို ကြည့်ပြီး ရုပ်ရှင်ထဲကအတိုင်း လိုက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံလိုက်တယ် ဆိုပါစို့။ လူတော်တော်များများက အဲဒီ ရုပ်ရှင်ကို တရားခံရှာကြလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ လောကကြီးက ကျယ်ဝန်းပြီး ဖြစ်ရပ်တွေ စုံလှပါတယ်။ အဲဒီ သေကြောင်းကြံသွားတဲ့လူဟာ အဲဒီ ရုပ်ရှင် မကြည့်ရလည်း လောကဓံရဲ့ တစ်ကွေ့ကွေ့မှာ တခြားတစ်ယောက်ယောက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေသွားတဲ့ သတင်းမျိုး ကြားတာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေကြောင်းကြံတာ ပါတဲ့ စာအုပ်တွေ ဖတ်ရတာ၊ သီချင်းတွေ နားထောင်ရတာ၊ ဒါမှမဟုတ် အဲလိုဖြစ်ရပ်ပါတဲ့ တခြားရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာ မျိုးတွေ ကြုံချင်ကြုံမှာပဲ။ တကယ်တော့ အဲဒီ လူငယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေသွားခြင်းမှာ အဓိက အကြောင်းရင်းက လောကကို အရှုံးပေးလိုစိတ် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ ပျော့ညံ့လွန်းတဲ့ စိတ်လည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် သူများကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး မဖြစ်စေချင်လို့ သတ်သေသွားတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ သူများ နောင်တရအောင် လုပ်ချင်လို့ သတ်သေတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ အချုပ်ကို ပြောရရင် အဓိက အကြောင်းရင်းက အဲဒီလူငယ်ရဲ့ စိတ်အနေအထားကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေခြင်း ဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေချင်နေတဲ့ အချိန်မှာ ရုပ်ရှင်ကို ကြည့်လိုက်ရတော့ အမြန် လုပ်ဖြစ်သွားတာမျိုးတော့ ရှိချင်ရှိမယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလူငယ်ဟာ အဲဒီ ရုပ်ရှင်ကို မကြည့်ရလည်း သူ့မှာသာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေချင်တဲ့ စိတ်တိမ်းညွတ်မှုမျိုး ရှိမယ်ဆိုရင် တစ်ကွေ့ကွေ့မှာ သူ့ကိုယ်သူ သတ်သေဖြစ်ဖို့ များပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ အရွယ်ရောက်ပြီး လူတစ်ယောက်ဟာ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခန်းပါတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်ပြီး လက်တွေ့စမ်းတယ် ဆိုပါစို့။ တကယ်တော့ အဲဒီလူဟာ လိင်ဆက်ဆံတဲ့ ရုပ်ရှင်တို့၊ တခြားစာအုပ်တို့ကို တစ်ကွေ့ကွေ့မှာ တွေ့မှာပဲ။ အသက်မပြည့်သေးတဲ့သူတွေ မကြည့်ရ၊ မဖတ်ရ ဆိုတာမျိုး တားမြစ်တာ ရှိသင့်ပေမဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီး လူတစ်ယောက်မှာ အဲဒီလူကိုယ်တိုင်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကပဲ အဓိက ကျပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ် ယူသင့်ပါတယ်။ တစ်ဘက်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဝေဖန်ခွင့်လည်း ရှိရမှာပေါ့။
ပိတ်ပင်တားမြစ်တာတွေမျိုးထက်... လူတစ်ယောက်၊ တရားခွေတစ်ခွေ၊ စာအုပ်တစ်အုပ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးက အလွယ်တကူ မခံဖို့၊ ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားဥာဏ်နဲ့ တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ပဲ အရေးကြီးတာပါ။။ ဒါက စာအုပ်အကြောင်းကနေ စစဉ်းစားရင်း ပေါ်လာတဲ့ အတွေးပါ။
ယူဆကြည့်လို့ ရတာ တစ်ခုက “Not For Conservatives” ဆိုမှ ရှေးရိုးစွဲတွေ ပိုဖတ်ချင်လာအောင် စတန့်ထွင်လိုက်တာလို့ ခန့်မှန်းကြည့်လို့ရတယ်။ ဒါမှ ဖတ်ချင်တဲ့သူ ပိုများလာမယ်လေ။ နောက်တစ်ခုက “Adult Fiction” ဆိုပြီး စာရေးသူကိုယ်တိုင် တံဆိပ်ကပ်လိုက်တဲ့ ကိစ္စ။ အဲဒီလို တပ်လိုက်တော့ အပြာဆန်ဆန် သဘော သက်ရောက်သွားစေတယ်။ “Adult Fiction” ဆိုရင် လူတိုင်းက အပြာစာအုပ်လို့ ရုတ်တရက် တွေးကြမှာပဲ။ ကိုယ့်စာအုပ်ကို အပြာစာအုပ်လို့ အထင်မခံချင်ရင် စာရေးသူကိုယ်တိုင်က “ကဗျာဆရာ တစ်ယောက်ရဲ့ ဆိုက်ကို နောက်ခံ ဝတ္ထု” လို့ပဲ ရေးလိုက်တာ ပိုကောင်းမယ်။ အခုတော့ ကိုယ့်စာအုပ်ကိုယ် နှိမ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်။ လူတွေကို လိင်ကိစ္စအကြောင်းအသားပေးလို့ မြင်လာစေပြီးတော့ ဖတ်လာကြအောင် ဆွဲဆောင်တာလားလို့လည်း တွေးကြည့်မိတယ်။
စာအုပ်ရေးတဲ့သူတွေကလည်း နာမည်ကြီးတွေရဲ့ ဝိတ်လိုချင်တော့ အမှာစာ မရမက ရေးခိုင်းတာမျိုးရှိတယ်။ အမှာစာရေးပေးဖို့ မျက်နှာချို သွေးကြရရှာတယ်။ အမှာစာကို ဖျစ်ညှစ်ပြီး ရေးနေရတယ်ဆိုတာမျိုးလည်း တစ်နေ့က ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ရယ်တော့ ရယ်ရတယ်။ မှာစရာ ထွေထွေထူးထူး မရှိရင် မှာမနေနဲ့တော့ပေါ့။ ပြီးတော့ အမှာစာ အများစုက ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်များတယ်လို့ ခုနောက်ပိုင်း ခံစားလာရတယ်။ အစဉ်အလာကို ရိုက်ချိုးတဲ့ဝတ္ထုဆိုတော့ တကယ်လို့ အဲလို အပေါ်ယံ ဟန်ဆောင်မှု အားလုံးကို ရိုက်ချိုးရင် ပိုကောင်းမယ်။
ဒါပေမဲ့ ထုတ်ဝေသူက ရေးချင်လို့ ဖြစ်စေ (သူက ပိုက်ဆံစိုက်မှာကိုး) ပြောစရာ တစ်ခုခု ရှိနေလို့ ဖြစ်စေ ရေးတာမျိုးကတော့ ရှိမှာပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ များသောအားဖြင့်တော့ စာဖတ်သူကို ဆရာလုပ်တာတွေ၊ စာရေးသူကို စွတ်မြှောက်ပေးထားတာတွေ၊ မဆိုင်တာတွေ၊ (တခါတခါဆို) အမှာစာရေးတဲ့သူက စာအုပ်ရေးတဲ့သူကို အပေါ်စီးကနေ ဆရာကြီးဆန်ဆန် သုံးသပ်ချိုးနှိမ်ရေးတာမျိုးတောင် ဖတ်ဖူးသေးတယ်။
အမှာစာဆိုတာ နိုင်ငံတကာမှာလည်း ရှိတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လေးငါးမျက်နှာလောက် ရှည်တာတွေတော့ မတွေ့ဖူးဘူး။ တွေ့လည်းမဖတ်ဖြစ်ဘူး။ များသောအားဖြင့်တော့ နိုင်ငံတကာ စာအုပ်တွေမှာ ထည့်ကြတာက ထင်ရှားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးဆီက စာတစ်ကြောင်း နှစ်ကြောင်းလောက်စီ စုထည့်ထားတာမျိုးများတယ်။ ဒါမှလည်း ကြေညာရာ ရောက်ပြီး ရောင်းကောင်းမှာကိုး။
(မှတ်ချက်။ ကျွန်တော် ပြည်ပမှာ စာအုပ်ထုတ်တုန်းက အမှာစာ ထည့်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဒါမျိုးအတွေးလည်း မရှိသေးဘူး။ အဲဒီတုန်းက အမှာစာ ရေးတဲ့သူက ထုတ်ဝေသူရယ်၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရယ်ပါ။ ထုတ်ဝေတာကလည်း စာကြည့်တိုက်က ကျောင်းသွားတွေမို့ အဲဒါမျိုး အမှာစာကိုတော့ ကျွန်တော် မြတ်နိုးပါတယ်။ ဒီတော့ တခြားသူတွေလည်း သူတို့ မြတ်နိုးတဲ့ စာရေးဆရာတွေကို တလေးတစား အမှာစာ တောင်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ခံစားနားလည် ပေးမိပြန်ရော။ ကျွန်တော့် ကဗျာစာအုပ်မှာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အမှာစာ ရေးခဲ့ရခြင်းရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းကတော့ စာအုပ်မှာ “ကျွန်တော်” “ကျနော်” ဆိုပြီး သတ်ပုံနှစ်မျိုး တမင်တကာ သုံးထားတာကို ရှင်းချင်လို့ပါ။ တကယ်တော့ ကိုယ့်ဘာသာရေးထားခဲ့တဲ့ အမှာစာကို အခုချိန် ပြန်ဖတ်ကြည့်တော့လည်း သိပ်အဓိပ္ပါယ် မရှိလှပါဘူး။ ကိုယ်ကျတော့လုပ်ပြီး သူများကျမှ ဝေဖန်သလိုဆိုတော့ hypocrite လို့ ကျွန်တော့်ကို ပြောလည်း ခံရမှာပဲ။ ဟုတ်လည်း ဟုတ်နေတာပဲလေ။ တကယ်တော့ အစဉ်အလာတွေကို ဆန့်ကျင်ရတယ်ဆိုတာ အပြောသာလွယ်ပြီး လက်တွေ့လုပ်ဖို့ကျတော့ ပေးဆပ်ရတာတွေ ရှိတာကိုး)
အမှာစာဆိုတဲ့ ဓလေ့က တကမ္ဘာလုံး လုပ်နေကြပေမဲ့၊ စာအုပ်ရောင်းထွက်ဖို့ လိုအပ်ပေမဲ့ အဲဒီလို ဝိတ်သုံးရတဲ့ အစဉ်အလာကြီးကိုတော့ သဘောမကျဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခြေအနေအရ လုပ်ကြရတာတွေကိုတော့ နားလည်ပေးလို့ရပါတယ်။ (မှတ်ချက်။ ။ ဆရာမြသန်းတင့်ရဲ့ အမှာစာ အရှည်ကြီးတွေ၊ ဆရာ တာရာရဲ့ အမှာစာ အရှည်ကြီးတွေကိုတော့ နှစ်သက်ပါတယ်။ သူတို့က စာဖတ်သူအပေါ် စေတနာထားပြီး ရေးတဲ့ အမှာစာတွေကိုး။ ဖတ်မိသလောက်က စာဖတ်သူတွေကို ငတုံးလို့ သဘောထားတဲ့ အမှာစာမျိုးတွေ မဟုတ်ဘူး။ ဒါတောင် သူတို့လည်း တခါတခါ စာအုပ်နဲ့ ဘာမှ မဆိုင်တာတွေကို စာရေးသူကို အားမနာဘဲ အမှာစာမှာ ရေးထားကြတာတွေ ရှိသေးတယ်)
မလေး ရဲ့ အမှာစာကတော့ အလွန်အကျူး ညွှန်းဆိုသလိုရှိတယ်။ ကျူးလွန်ချိုးဖောက်မှု မပါတာကို ပုပ်ပွနေတဲ့ ရေသေအိုင်နဲ့ တင်စားထားသေးတယ်။ ပြီးတော့ ရိုမန်းဘော့ထ်ဟာ လူသားသစ်၊ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းသစ်နဲ့ ကမ္ဘာသစ်ကို ဖျတ်ခနဲ လှမ်းမြင်ထားပြီးပြီတဲ့။ ကျန်တဲ့သူတွေကရောတဲ့။ စိန်ခေါ်ထားတာလား၊ ရိုးရိုးမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာလားတော့ မသိ။
ခုနက sexist ဖြစ်တဲ့၊ အမျိုးသမီးတွေကို နှိမ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းစဉ် အပြီးမှာတော့ လိင်ဆက်ဆံတာကို အသေးစိတ်ရေးပြထားတယ်။ တကယ်ကတော့ မထည့်လည်း ရတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းမျိုး။ အဲဒီ ဇာတ်ဝင်ခန်းမှာ metaphor နဲ့ လှလှပပ ဖွဲ့ထားတာမျိုးလည်း မရှိဘူး။ ဒါကိုတော့ နားလည်ပေးလို့ရတယ်။ ဇာတ်လမ်းအတွက် မလိုအပ်လှပေမဲ့ သူက လိင်ကိစ္စဆိုတာ ရှက်စရာ ရွံစရာ မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ မက်ဆေ့မျိုး၊ ဟန်ဆောင်မှုတွေကို ရိုက်ချိုးချင်တာ မဟုတ်လား။
အပျိုစင်ဖြစ်နေရမယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ပယ်ချတာမျိုးတော့ လက်ခံပါတယ်။ ဒါကလည်း တော်လှန်ရေး တစ်ရပ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အထူးအဆန်း အမှတ်ပေးရလောက်အောင်တော့ မဟုတ်ဘူး။ လက်တွေ့အပြင်လောကမှာ သဘောထားပြည့်ဝတဲ့ ယောကျာ်းတော်တော်များများ အဲလိုသဘောထား ရှိကြတာပဲ။
အောင်ရင်ငြိမ်းရဲ့ အခန်း(၂) မှာ Anarchism (မင်းမဲ့ဝါဒ) အငွေ့အသက်လေးတွေတော့ ထင်ဟပ်နေတယ်။ မတရားတဲ့ ဥပဒေတွေကို ဆန့်ကျင်ထားတာမျိုး ပြောထားတာတွေ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အယူအဆသစ် တစ်ခုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအချက်လေးတွေ ရေးပြရုံနဲ့တော့ ဒီဝတ္ထုကို တော်လှန်ဝတ္ထုအဖြစ် အမှတ်ပေးစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ ပြီးတော့ မတရားတဲ့ ဥပဒေအကြောင်း ပါးပါးလေး ထည့်တာမျိုးထက် အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် ရေးသွားသလို ခံစားမိတယ်။ Anarchism အငွေ့အသက် ပါတယ် ဆိုပေမဲ့ တကယ့် anarchism တော့ မဟုတ်ဘူး။ Anarchist တွေက ဥပဒေဆိုရင် လုံးဝကို လက်မခံတာ။ အခြေခံဥပဒေဆိုတာ ဥပဒေ ဖြစ်နေတဲ့ အတွက်ကို ပယ်ချကြတာ။ ဒီထဲက ဇာတ်ကောင်ကတော့ တကယ် တရားမျှတဲ့ ဥပဒေ ဆိုတာ ရှိသင့်တယ်လို့ ဆိုထားတယ်။
အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး အိပ်လိုက်တဲ့အခါ အမျိုးသားက အမြတ်ထွက်ပြီးတော့ အမျိုးသမီးက နစ်နာသွားတယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ဇာတ်ကောင်က ပယ်ချထားတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အဲလိုပဲ တွေးတယ်။ ဒါလည်း အတွေးအခေါ် အသစ်အဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အများစုက မိန်းကလေးတွေ နစ်နာတယ်လို့ တွေးကြတာ မှန်ပေမဲ့ အပြင်လောကမှာ မိန်းကလေးတွေ အပါအဝင် တော်တော်များများက ဘယ်သူမှ မနစ်နာဘူးလို့ပဲ တွေးပြီး အိပ်နေကြတာတွေ ရှိတာပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ရှိတယ်။ နစ်နာတယ် ထင်ရင်မိန်းကလေး တော်တော်များများက အိပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ အိပ်ပြီး ယောကျာ်းလေးကို ပစ်သွားတဲ့ မိန်းကလေးတွေတောင် ရှိသေးတယ်။ တစ်ခုတော့ ရှိတယ်နော်။ ကိုယ်ဝန်ရသွားတဲ့ ကိစ္စမျိုးမှာ ယောကျာ်းလေးက ပစ်သွားတာမျိုးဆိုရင် မိန်းကလေးဘက်က တော်တော်နစ်နာပါတယ်။ အဲဒါမျိုး ပစ်သွားတာကိုတော့ လက်ခံပေးလို့ မရဘူး။
၉၆၉ နဲ့ မဘသ ကို ဆန့်ကျင်ထားတာလည်း ပါတယ်။ အနောက်ဘက် ခြံစည်းရိုးတစ်ဝိုက်မှာ လူမျိုး တစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုး လူသားအသိအမြင်တွေ ပျောက်ကွယ်နေတယ် ဆိုတာ ရေးထားတယ်။ “အမှောင်ခေတ်လွန် သို့မဟုတ် အရူးခေတ်လွန် ၉၆၉ စင်တီမီတာ” တဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပေမဲ့ လူသားဝါဒလေး ရှိနေတာကိုတော့ အသိအမှတ်ပြုမိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲလိုဟာတွေ ထည့်ထားပုံက သက်သက်၊ ဝတ္ထုက သက်သက်လို တခြားစီ ဖြစ်နေတယ်။ အတင်းကြီး ညှပ်ထည့်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်။
ကြားထဲမှာ အိုရှိုးအယူအဆတွေ ထည့်ထားတယ်။ ဒါကလည်း အိုရှိုးဖတ်ဖူးပြီးသားသူတွေ အတွက်ဆို သိပ်အထူးအဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။
စာမျက်နှာ ၁၁၁ မှာတော့ အသစ်အဆန်း မဟုတ်ပေမဲ့ လှပတဲ့ သဘောထားလေးကို တွေ့ရတယ်။ စံနှုန်းတွေကို ပစ်ပယ်ထားတဲ့ ဇာတ်ကောင် ရိုမန်းဘော့ထ်ရဲ့ စံနှုန်းတစ်ခုကို ဖတ်လိုက်ရတယ်။ “ဟင့်အင်း… သူတို့ကို (ယေဘုယျကျင့်ဝတ်တွေကို လိုက်နာတဲ့သူတွေကို) ကွန်ဆာဗေးတစ်တွေလို့ ကိုယ်မစွပ်စွဲချင်ပါဘူး။ သူတို့အမြင်မှာ အဲဒါကို ကောင်းမွန်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားလို့ ယုံကြည်နေမယ်ဆိုရင် ကောင်းမှုလို့ သတ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင် ကောင်းတဲ့အပြုအမူကို လုပ်တာကို ကိုယ့်အနေနဲ့ အပြစ်တင်စရာမှ မလိုအပ်တာ။ သူတို့ တန်ဖိုးစံနှုန်းနဲ့ သူတို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြုမူကျင့်ကြံ နိုင်ပါတယ်။ အဲ…. ဒါပေမဲ့ သူတို့က သူတို့သာ ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားပိုင်ရှင်တွေဖြစ်တယ်။ သူတို့ ကိုင်စွဲထားတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တန်ဖိုးစံနှုန်းတွေနဲ့ သွေဖည်နေတဲ့သူတွေကို ကိုယ်ကျင့်တရား ပျက်ယွင်းနေသူတွေလို့ စွပ်စွဲပြောဆိုလာမယ် ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဆန့်ကျင်ငြင်းဆန်ရလိမ့်မယ်” တဲ့။
“ကိုယ့်တန်ဖိုးစံနှုန်းကိုမှ အမှန်တရား၊ ကောင်းမှုလို့ စွဲလမ်းဆုပ်ကိုင်ထားပြီး ကိုယ်နဲ့မတူတဲ့ တခြားတန်ဖိုး စံနှုန်းတွေကို အမှား၊ မကောင်းမှုလို့ သတ်မှတ်ယူဆမယ်ဆိုရင်၊ ဥပမာ မိစ္ဆာဒိဌိလို့ ပြောမယ်ဆိုရင် အဲဒါ တရားမျှတမှု မရှိတဲ့ အပြုအမူ တစ်မျိုးပဲလေ” ဆိုပြီး ရေးထားပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ အိုရှိုးက စကားဝိုင်းထဲ ဝင်လာပြန်ရော။ ဒါပေမဲ့ ဒဿနတွေကို အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် ချပြဖို့အတွက် အတင်းကြီး ညှပ်ထည့်ထားသလိုဖြစ်နေတယ်။ (ဇာတ်လမ်းထဲက) အိုရှိုးက ဝင်ပြောတယ်။ “ခင်ဗျားတို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်က ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာ ကိုယ်ကျင့်တရား၊ လူမှုကျင့်ဝတ်၊ အတွေးအခေါ်ဟောင်းတွေရဲ့ ဆုံးမသွန်သင်မှုတွေပဲ လွှမ်းမိုးကြီးစိုး အမြစ်တွယ်နေတာ” တဲ့။ Gay Right ကို ထောက်ခံထားပြီး ပုဒ်မ-၃၇၇ ကို ဆန့်ကျင်ထားတယ်။ သိပ်အထူးအဆန်း မဟုတ်ပေမဲ့ တိုးတက်တဲ့ အမြင်လို့တော့ ပြောရမှာပေါ့။
အခန်း (၁၁) မှာတော့ ရပ်ဆဲလ် တို့ အိုရှိုးတို့ မြသန်းတင့်တို့ရဲ့ စာအုပ်တွေအပြင် ရိုမန်းဘော့ထ်စာအုပ်ကို အမှာစာ ရေးပေးထားတဲ့ မင်းခက်ရဲ တို့ မလေး တို့ရဲ့ စာအုပ်တွေထဲမှာ ဇာတ်ကောင် ရိုမန်းဘော့ထ်က စိတ်အာရုံ နှစ်မြှုပ်ထားသတဲ့။ သြော်….ရိုမန်းဘော့ထ်က အောင်ရင်ငြိမ်းရဲ့ စာအုပ် မဖတ်လို့တော်သေး။ :D
ဒီစာအုပ် ဖတ်သွားပြီးတော့ erotica လို့တော့ မထင်တော့ဘူး။ ကာမရာဂ စိတ် ဆွမှ ဆွမပေးနိုင်ပဲကိုး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ဖတ်နေတာ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်လား၊ ဒါမှမဟုတ် အဆိုအမိန့်တွေ၊ အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် စုထည့်ထားတဲ့ အဆိုအမိန့်ပေါင်းချုပ်လားလို့ သံသယ ဖြစ်သွားတယ်။ အဆိုအမိန့်တွေတင် မကဘူး၊ နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေလည်း အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် ထည့်ထားတယ်။ အဆိုအမိန့်တွေနဲ့ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ် တည်ဆောက်နိုင်တယ်လို့ လက်ခံနိုင်ပေမဲ့ ဝတ္ထုထဲမှာ စာရေးဆရာ အဆိုအမိန့်တွေကို ထည့်သုံးထားပုံက ချောချောမွေ့မွေ့ ပြေပြေပြစ်ပြစ် မရှိလှဘူးလို့ ထင်တယ်။
အတွေးအခေါ် တော်လှန်ရေးလို့ ပြောရအောင်ကျတော့လည်း ဒီဝတ္ထုထဲက အတွေးတွေဟာ တစ်ချို့တွေအတွက်တော့ ခုမှ အသစ်အဆန်း ဖြစ်နေနိုင်ပေမဲ့ တကယ်တော့ အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုအမိန့်တွေ များလွန်းတော့ ကိုယ်ပိုင်အယူအဆ နည်းသလိုလည်း ဖြစ်နေတယ်။ ပါတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အယူအဆတွေကလည်း အသစ်အဆန်းတော့ မဟုတ်လှပါဘူး။ ဒါပေမဲ့လည်း ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ လုပ်ပုံ၊ လူအများစုရဲ့ တွေးပုံခေါ်ပုံတွေကြောင့် ဒီလောက်လေးကပဲ တော်လှန်ရေးတစ်ရပ်လိုတောင် ဖြစ်သွားရော။